समाचार - उच्च बोरोसिलिकेट गिलास वा साधारण गिलासमा पानी पिउन राम्रो छ?
यसको जन्म पछि, बोरोसिलिकेट गिलास शिक्षण को लागी मानिसहरु लाई मन पराइएको छ। यो उच्च पारदर्शिता, घर्षण प्रतिरोध, चिकनी सतह, सजिलो सफाई, र स्वास्थ्यको साथ गृह जीवनको लागि एक आवश्यकता हो।
यद्यपि धेरै प्रश्नहरू चुपचाप खडा भएका छन्, "के उच्च बोरोसिलिकेट गिलास कप विषाक्त हुन सक्छ? पानीको सिलिकन पिउन उच्च बोरोसिलिकेट गिलास विघटन हुन्छ" र यस्तै। अन्तमा पिउनको लागि उच्च बोरोसिलिकेट ग्लास राम्रो छैन, निम्न म तपाईंलाई उच्च बोरोसिलिकेट ग्लासको व्याख्या गर्न लैजान्छु।
उच्च बोरोसिलिकेट गिलास गिलासको प्रयोग उच्च तापमान प्रवाहकीय विशेषताहरूको स्थितिमा हुन्छ, आन्तरिक तताउने मार्फत गिलास पग्लन महसुस गर्न, तब, एक प्रकारको कम मुद्रास्फीति, उच्च तापमान प्रतिरोधी, उच्च शक्ति, उच्च तापमान, उच्च कठोरता, उच्च प्रकाश प्रसारण र उच्च रासायनिक स्थिरता विशेष गिलास सामग्री, यसको उत्कृष्ट प्रदर्शनको कारण, गिलास कपको उच्च बोरोसिलिकेट सामग्रीले सामान्य गिलास कपको फाइदाहरू प्रदान गर्न सक्दैन।
साधारण गिलास कप
सामान्य गिलास टेकअपहरू तातोमा असमान हुन सजिलो हुन्छ, परिणामस्वरूप प्रत्येक अंशको फरक तापक्रम हुन्छ। चिसो र तातोमा विस्तार र संकुचनको सिद्धान्तको कारणले गर्दा, जब हीटिंगमा असमान र धेरै ठूलो भिन्नता छ, गिलास भाँच्न सजिलो छ। त्यस्तै समय, सामान्य गिलासको तातो उच्च छैन, धेरै उच्च तापमान पनि बनाउन सजिलो छ। गिलास भाँचियो
उच्च बोरोसिलिकेट गिलास कप
उच्च बोरोसिलिकेट ग्लास टेकअप उच्च तापक्रममा गोलीबारी द्वारा बनाईएको छ, जुन उच्च तापमान र कम तापक्रममा अनुकूलित हुन सक्छ। १०० ℃ तातो पानी टुक्रिने छैन, र त्यहाँ कुनै थर्मल विस्तार र चिसो संकुचन सामान्यतया सामान्य वस्तुहरूमा देखा पर्दैन। एसिड पेय र अन्य तरल पदार्थहरू पनि गन्धहीन र स्वादहीन दिइन्छ। विशेष गरी, उच्च बोरोसिलिकेट उच्चसँग विशेष गिलास सामग्री हो। रासायनिक स्थिरता, र त्यहाँ सिलिकन पग्लने जस्तो कुनै चीज छैन। यसबाहेक, उच्च बोरोसिलिकेट गिलास कपहरू सफा गर्न सजिलो हुन्छ र सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गर्दछ।